'Owathengela umfundisi imoto ka-R1m uyehluleka ukukhokha isikweletu' | News24
'Owathengela umfundisi imoto ka-R1m uyehluleka ukukhokha isikweletu'
Johannesburg - Isihlabani somculo weGospel, uSfiso Ncwane, okuthiwa wathengela umfundisi wakhe imoto engaphezuku kuka-R1 million – sekuvele ukuthi uyehluleka ukukhokhela umhlelo wemicimbi engacishe ifinyelele ku-R73 000.
Manje, uSfiso asengase alahlekelwe okuningi, kubika iSunday Sun.
Iphephandaba libika ukuthi lesi sihlabani sesimangalelwe enkantolo ngokuhluleka kwaso ukufika emcimbini ukuba sizonandisa ekubeni sasesikhokheliwe.
USfiso kuthiwa waqashwa ukuba azonandisa kwi-All White Jazz Festival eMorula Sun, ngaseMabopane, ngoDisemba 16 ngonyaka odlule kodwa wangafika.
Funda nalolu daba: Injalo uTsekeleke ehola izinkulungwane zemali
Umhleli womcimbi, u-Eldridge Motlhake, utshele iphephandaba ukuthi waseyikhokhe yonke imali ayeyifunile uSfiso ukuze afike emcimbini. Uthe futhi usezame konke okusemandleni akhe ukucela ukubuyiselwa imali kodwa lutho.
“Akukho esengingakwenza manje ngaphandle kokubabela enkantolo, usho kanje.
USfiso kuthiwa uthe yena akawukhumbuli umcimbi i-AllWhite Jazz Festival, awukhumbulayo yilowo owawuhlelwe nguyena eManzimtoti.